(Kugcine ukubuyekezwa On: 03/07/2020)
Kuleminyaka 10 iminyaka, izigidi sesizicabangile yeka indlela okuzuzisa ngayo ukuthatha isitimela! Amasimu Rich zasemazweni, ogwini elikhazimulayo futhi entabeni acwebile zamakhorali that are never mentioned in travel brochures or blogs. Ukuthatha isitimela kuyinto fun, elula futhi ngendlela isikhwama-friendly ukusuka endaweni A ukhombe B, ngakho ungacabangi kabili, uthatha isitimela!
Into yesibili enhle ngezitimela eYurophu futhi ngokuvamile indlela abangaba nesabelomali ngayo. Akukona nje kuphela ukuthi kukhona abaningi kangaka izindawo ezishibhile ongakhetha kuzo, kodwa futhi ngezindlela eziningi ukuze unciphise jikelele zohambo. Ngakho-ke uma ngabomvu ukubabona ukuthi hit ngesinye ujantshi ngokushesha, nawa amathiphu ambalwa enkulu ukusebenzisa:
Noma ngabe umfundi othanda ukuhamba noma umuntu othanda ukuvakasha njalo uthatha isitimela nsukuzonke, esilele isitimela kungaba engase bagawula kwemali esetshenziswe yokuhlala cishe ngesigamu. Kuyindlela Amazing ukuze wonge isikhathi kakhulu njengoba wena balale emzini owodwa futhi uvuke kwenye. Sengikushilo lokho, kubalulekile ukuqonda izinhlobo ezahlukene ebusuku isitimela zokulala.
Packing ukudla zakho siqu iyona indlela eshibhe ukuya ngakho. Ngokungafani ukuhamba njalo ngebhasi noma imoto, uma uthatha isitimela ungakwazi empeleni udle kahle. izihlalo Iningi itafula wokudonsa noma itafula fixed phakathi izihlalo ezimbili. Nokho, uma kufanele ukuthenga ukudla yakho kanye iziphuzo phakathi kohambo lwakho, kulungile. Isidlo esitimeleni akuyona ngokweqile pricey futhi ungakwazi ngokuvamile isicelo avele akunikeze izaphulelo.
Thatha Isitimela ukuze Londoloza-A-zemininingwane, ukhethe uya khona futhi uthatha isitimela cishe nomaphi eYurophu amanani ezingabizi kakhulu emakethe! futhi, Qagela? Uma uthola ithikithi lakho Isitimela Londoloza Isitimela, Inqubo yokubhuka kwenziwa ngaphakathi 3 amaminithi, ngakho izikhwama zakho futhi ujabulele konke elandela!
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho, bese uchofoza lapha: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/take-train-europe/ - (Skrolela phansi ukuze ubone Shumeka Ikhodi)